Myanmar: Naaton’ny Filoha ny Fananganana Tohodrano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Oktobra 2011 13:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, বাংলা, Español, 日本語, Aymara, Svenska, English
Naaton'ny governemanta ny fananganana tohodrano efa niteraka adihevitra saika aorina eo amin'ny reniranon'i Ayeyarwaddy any amin'ny faritra avaratr'i Myanmar. Nandefa taratasy tany amin'ny Antenimiera mampilaza ny fampiatoana ny fanemorana ny fananganana ny tohodrano ny Filoha Thein Sein noho ny tombontsoam-bahoaka.
Iray amin'ny foto-drafitr'asa aorin'i Shina any Myanmar ity tohodrano ity. Ny drafitra amin'izany dia ny hanondranana angovo azo avy ao ho any Shina.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety moa ny Minisitry ny Angovon'aratra Zaw Min, iray volana lasa izay, fa tsy hampiato ny tetikasa na dia eo aza ny ahiahin'ny fikambanana maro. Saingy nahatonga ny fanajanonana ny fananganana ny tohodrano ny hetsika isan-karazany nataon'ny olona tahaka ny fanangonan-tsonia, atrikasa ary ny seminera isan-karazany nisesisesy tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Na dia ny gazety aza dia nampiako ny fijerin'olo-tsotra ka tafiditra amin'izany ireo olona malaza niangavy ny filoha hampitsahatra ny tetikasa.
Renirano Ayeyarwaddy, Myanmar. Saripika mpisera Flickr DamienHR ambany lisansa CC Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0).
Nilaza ny hafaliany ny mpiserasera birmana nanoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondrana. HeinHlyan528 nilaza ny heviny tao amin'ny takelaka fandraisana tao amin'ny Eleven Media, fampitam-baovao malaza any Myanmar:
Voalohany dia tiako ny misaotra an'Atoa Filoha izany nanemotra ny fananganana ny tohodrano. Izay rehetra liana amin'ny raharaha eto Myanmar dia mahafantatra ny hasarotan'ny fanapahan-kevitra tahaka zany. Misaotra an'Atoa Filoha amin'ny foko manontolo aho amin'ny fananana fahasahiana amin'ny fanomezana fahafaham-po ny tadiavin'ny vahoaka na dia eo aza ny fiantraikany mandritra ny fotoana maharitra eo amin'ny filàna angovon'i Shina izay miaro an'i Myanmar eo anoloan'ny vaomieran'ny Fandriampahaleman'ny Firenena Mikambana sy ny fiantraikan'ny fanafoanana fifanarahana efa vita sonia. Fihetsika manantantara izany. Maniry aho, amin'ny maha olom-pirenen'i Myanmar ahy, ny hahalala hamahan'i Shina Malalantsika ity raharaha ity
Mpilaza hevitra hafa, babymilo, nanoratra tahaka izao:
Hatramin'ny fanemorana ka hatramin'ny fandravana, mila miara-dalana hatrany isika
Nahaangona ny domberin'ny olona ny Eleven Media. Vehivavy iray 60 taona avy any Myitkyina nilaza ny hafaliany tamin'ny fampiatoana ny tetikasa
Nahemotry ny fitondrana tokoa ve ? Tena faly aho. Tsy ilaina intsony ny manamarika ny ahiahiko tamin'io tetikasa io. Tsy izaho irery fa ny tanàna sy ny firenena iray manontolo. Hanimba ny natiora io [tetikasa io]. Tsy hiteraka afa-tsy korontana. Tena faly aho nandre ny vaovao
Nandritra izany fotoana izany dia namoaka ity hevitra ity tao amin'ny takelaka Facebook-n'i Voice Weekly, gazety malaza iray hafa any Myanmar, i NayOoPeople.
Milay!!!! Io no fiatombohan'ny fifampitokisana mahomby eo amin'ny DASSK (Daw Aung San SUU KYI), ny olom-pirenena birmana, ny vondrom-poko ary ny fitondrana ankehitriny!
Saintsy tsy ny olom-pirenena rehetra no mino fa mariky ny fiovana ao amin'ny firenena ny fampiatoana io tetikasa io. Mpilaza hevitra tsy nitonona anarana no nametraka izao hafatra izao tao amin'ny bolongana Irrawaddy News
Afaka milaza tena ho fitondram-bahoaka amin'izay izy izao. Saingy tsy nomarihan-dry zareo raha najanona tanteraka izy ity na tsia. Mbola misy tombontsoa ho azon-dry zareo na tsy misy aza io. Fa raha tsy mahazo aza dia mila miandry dimy taona monja ry zareo. Tsy azo lazaina noho ny tombontsoam-bahoaka io. Tsy azo lazaina ihany koa fa nanova an'i Myanmar ihany koa
Nampitandrina ny amin'izay horakoraka tsy tafavoaka ny ala ihany koa i Tint Kyaw Naing
Midika ve izany fa raha tsy azo notohizana nandritra ny governemanta nofidiam-bahoaka dia mety hitsangana rahatrizay fitondra-miaramila indray? Fa raha izany dia aleo tohizana !
Nomarihan'ny The Irrawaddy News ny fankasitrahan'ilay olomangan'ny demokrasia, Aung San Suu Kyi, fanta-daza manerantany ity fanapahan-kevitry ny filoha ity nandritra ny fihaonana tamin'ny Minisitra Aung Kyi.